Idaacadii Cusbayd ee Radio Hargeysa oo dalka iyo dibaddaba laga dhagaystay | KULMIYE
Idaacadii Cusbayd ee Radio Hargeysa oo dalka iyo dibaddaba laga dhagaystay
Hargeysa – War-laliskii cusbaa ee Idaacadda Radio Hargeysa ayaa maanta laga wada dhagaystay goboladda dalka iyo qaar ka mid ah wadammadda jaarka ah, sida uu shabakada Somaliland.Org, u xaqiijiyay Agaasimaha Idaacada Radio Hargeysa Siciid Aadan Cige.
“Warlaliskii cusbaa ee idaacada Radio Hargeysa waxa uu maanta hawada u gelay si tijaabo ah, waxaana maanta si weyn looga wada dhagaystay goboladda iyo degmooyinka dalka oo dhan iyo qaar ka mid ah dalalka dariska ah,”ayuu yidhi Siciid Aadan Cigge.
Agaasimaha oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Waxa kale oo Idaacada cusub laga dhegaystay oo naloo soo xaqiijiyay dalalka Jabuuti, Kenya, Tansania iyo qaar kale, waana tallaabo horumar ah oo wasaaradda warfaafintu gaadhay.”
Idaacadda cusubi waxay dabooli doontaa baahidii shacbiga Somaliland ee goboladda dalka iyo dibaduba u qabeen idaacad dalka oo dhan wada gaadha oo ay ka kala socdaan horusocodka dalkooda, waxaanay soo afjaraysaa 21 sanadood oo dhegaha bulshadu u rahmanayeen idaacado shisheeye.
Idaacada cusub ayaa ka mid ahayd balan qaadkii Madaxweyne Siilaanyo xiligii uu ku jiray olalaha doorashada madaxtooyadda, waxaanay ku guulaysatay inay balan qaadkaasi ku fuliso laba sanadood iyo Billo.